Imizuzwana emi-4 okanye iBust | Martech Zone
NgoLwesithathu, Novemba 8, 2006 NgoLwesihlanu, Oktobha 24, 2014 Douglas Karr
Uyayikhumbula imihla yokulala kunye nemodem yakho ungcungcutheka kunye nokukhuphela amaphepha ukuze ukwazi ukuwajonga ngentsasa elandelayo? Ndicinga ukuba ezo ntsuku zisemva kakhulu kuthi. UJohn Chow uthumele inqaku kolu phando lukhutshwe nguJupiter echaza ukuba abathengi abaninzi kwi-Intanethi baya kukhupha xa iphepha lakho lingalayishi kwimizuzwana emi-4 okanye ngaphantsi.
Ngokusekwe kwingxelo yabathengi abali-1,058 abakwi-intanethi abathe bavavanywa kwisiqingatha sokuqala sika-2006, iJupiterResearch ibonelela ngolu hlalutyo lulandelayo:
Iziphumo zomthengisi okwi-Intanethi onesiza esisebenza gwenxa kubandakanya ukupheliswa kokuthakazelelwa, umbono olubi wegama, kwaye, okona kubaluleke kakhulu, ilahleko ebalulekileyo kwintengiso iyonke.
Ukunyaniseka kwe-shopper kwi-Intanethi kuxhomekeke ekulayisheni iphepha ngokukhawuleza, ngakumbi kubathengi abachitha imali eninzi kunye nabo banendawo enkulu yokusebenza.
IJupiterResearch icebisa ukuba abathengisi benze yonke imizamo yokugcina iphepha linikezela lingadluli kwimizuzwana emine.
Iziphumo ezongezelelekileyo kwingxelo zibonisa ukuba ngaphezulu kwesinye kwisithathu sabathengi abanamava amabi bayishiya ngokupheleleyo indawo, ngelixa iipesenti ezingama-75 kungenzeka ukuba zingaphinde zithenge kule ndawo. Ezi ziphumo zibonisa ukuba iwebhusayithi engenzi kakuhle inokonakalisa igama lenkampani; ngokophando, phantse iipesenti ezingama-30 zabathengi abangonelisekanga baya kuthi bakhulise umbono ombi malunga nenkampani okanye baxelele abahlobo babo kunye nosapho malunga namava.
Oku kunokuba ngumthetho omkhulu wesithupha kuso nasiphi na isicelo. Imizuzwana emi-4 inokuba ngumqobo omkhulu - ngaphandle kwedatha yobunzima kunye nokudityaniswa kwedatha enkulu, iphepha lesibini elingu-4 linokufuna ukuba lelona xesha liphezulu lokulayisha kwiphepha ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokwandisa okanye sokunqunqa ukusebenza.
Ukuba ungumthengi, oku kunokuba yinto ekulindelwe ukuba ufuna ukuseta kunye nomthengisi wakho. Andiqinisekanga ukuba umthetho ungasetyenziswa nkqo ngokuthe nkqo, kodwa ndiqinisekile ukuba ukungabinamonde kukuphelelwa ngumonde, nokuba yivenkile ekwi-intanethi okanye isicelo esikwi-Intanethi.
tags: 4 imizuzwanaixesha lokujongaukwaneliseka kwabathengie-commerceeCommerceilahleko kwintengisoumthengisi onlineidumelaumthengisishopper ukunyaniseka
Umbuzo omnye ekufuneka ubuzile kuphando lwakho olulandelayo